Dị nnọọ ka ọ bụla racetams na ahịa, ọ ka na-aghọtachaghị nke ọma otú Fasoracetam na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, nnyocha e mere gosiri na ọ na-arụ ọrụ ndị a;
Ọ na-eme ka acetylcholine nke a napụtara site na cerebral cortex dị. Acetylcholine bụ onye neurotransmitter nke achọtara na ụbụrụ na onye ọrụ ya bụ ime ka nchekwa, mmụta na mkpokọta cognition. Fasoracetam na-arụkwa ọrụ dị ka cholinergic site na ịmalite itinye choline na hippocampus na cortex. Choline bụ nri nke na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'ikere ihe acetylcholine n'ime ụbụrụ.
Ya mere, anyị nwere ike ịsị na Fasoracetam na-arụ ọrụ na atọ ndị nabatara na-enye ihe yiri ya. Ihe mbụ ọ na-eme bụ na ọ na-arụ ọrụ na ntinetransmitter choline nke a na-akwalite ọrụ ọrụ nataghachi ya. Nke abuo ọ na - akpali mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị na - anabata GABA, na n'ikpeazụ, ọ na - agbanwekwa ndị ntinye mmịnye glutamate. Omume a niile na-eduga ná mmụba nke ike nke ndị ọrụ Burkinaracetam.
Taa, ADHD bụ otu n'ime ọnọdụ kachasị ọnọdụ ndị okenye na-eche ihu. Nke a bụ n'ihi na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-etinye aka n'ọtụtụ ọrụ n'otu oge ahụ nke na-eduga n'ịdị na-eme ka uche ha dịkwuo ogologo oge. Burkinaracetam ejiri ya dị ka ọgwụ kachasị maka ọtụtụ ndị ọrịa ADHD. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa iji belata mgbaàmà. Ihe niile ị ghaghị ịma tupu ịzụta SARM
Mgbe mgbanwe dị na GABA, mgbanwe dị iche iche nke ndị nabatara ya, onye nwere ike ịda mbà n'obi. Nke a bụ n'ihi na ihe ọzọ abụghị ịkụda obi ụtọ; ọ na-achịkwa neurogenesis na mgbatị na-adịghị adị. Nchegbu na-ebelata ọmụmụ nwa ọhụrụ ọhụrụ nke na-ahụ maka iwu nke cognition na ọnọdụ. Mgbe a na-ebute neurogenesis, usoro GABA na-enyere aka ịchịkwa ọnọdụ.
Inweta Burkinaracetam na-enwekarị ike ibuli anya gị. Ọ na-egbochi enweghị enyemaka nke pụrụ ịkpata obi nkoropụ na ịda mbà n'obi. Fasoracetam na-agba ume ka a na-ebute ụzọ nke choline nke na-enyere aka melite nchebara echiche na itinye uche. A maara Choline iji nyere aka na nhazi nke nguzozi nke mkpụrụ ndụ, ntanetransmission na mmepụta nke homocysteine.
Ọzọkwa, a na-ejikọta choline na acetylcholine nke na-etinye ngwa ngwa site na nkwụsị akwara iji nyere aka n'izipụ ozi ntanetị. Acetylcholine na-eme ka nzaghachị dịkwuo mma nke pụtara na ọ ka mma anya ma na-enyere aka n'ilekọta anya.
Ihe dị iche n'etiti ụmụ akwụkwọ dị elu na ndị na-adịghị ngwa ngwa bụ nkà dị mma ezi uche dị mma nke ezi ndị mmụta nwere. Mgbe a na-emezi nkà nke uche mmadụ, na-amụ ihe n'ihi na ọ dị mfe na ngwa ngwa. Ozugbo ị na-eji Fasoracetam, a na-eme ka nkà gị na-emekwu nke ọma, a na-ewusi ikike iche echiche gị ike. Ọ mepụtara ngwa ngwa nke mgbakwụnye nke ozi ọhụrụ site na nkwekọrịta cholinergic nke ọrụ ntanetị.
Nchegbu na-abịa site na ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka mgbanaka na nsogbu ndị na-akpata obi mgbawa dị ka ndị na-enweghị ihe ọ bụla a maara iji nyere aka n'ụzọ dị ịrịba ama. Otu n'ime ihe dị otú a bụ Fasoracetam nke na-eme ka ọ bụrụ onye na-emekwu ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ nke na-enye aka mee ka ụbụrụ GAB dị ka ụbụrụ iji gbochie ọrụ ọ bụla ọzọ. Omume ndị a na-eme ka obi dị nwayọ, na-enwe obi ike n'ikwu okwu dịka okwu na-eme ka mkpali dịkwuo mma ka ị bụrụ onye na-elekọta mmadụ.
Ọ bụ ezie na a pụrụ iji ọtụtụ ndị na-ahụ maka ọgwụ na-eme ihe maka ọrụ ndị yiri ya, Burkinaracetam bụ nhọrọ ka mma. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ na-adọta anxiolytics mgbe eji ya ogologo oge. Ndị jiri Fasoracetam nwere ike ikweta na ọ naghị eme ka ahụ riri ahụ ma na-eme ka ahụ nwee nchekasị maka ịdabere. Mgbe okporo ụzọ GABA na glutaminergic dị mma, mgbe ahụ, a ga-ebelata ohere ụra na oké ịdaba.
Icheta ihe nfu na ebe nchekwa na-esiri gị ike karịsịa ma ọ bụrụ na ị pụghị icheta ihe ma ọ bụ ndị mmadụ maara. O nwere ike ịdị gị ka obi ike, ùgwù na nnwere onwe na-ebelata na-enwe mmetụta na-enweghị enyemaka. A maara Fasoracetam iji nyere mmadụ aka ịnọgide na-adị nkọ ma belata ncheta ncheta.
N'ime ule a na-agwọ ọrịa na ADHD, a na-eji ọnụ ekwu okwu na 100, 200 na 400 mg. N'ọnọdụ ihu, ọtụtụ ndị ọkachamara kwuru na Burkinaracetam dị irè n'agbata 100-800mg kwa ụbọchị. Burkinaracetam nwekwara ike iwere ya n'ụzọ abụọ, nke pụtara na ị nwere ike idowe ya n'okpuru ire ya na ụdị nrịba dị n'etiti 5-15mg kwa ụbọchị.
Ọ dị mma na-ewere Fasoracetam n'onwe ya, mana ụfọdụ ndị nwere ike ịchọrọ ịtọ ya. Mgbe ị na-arụ ọrụ, ị na-ewere Burkina Faso na ndị ọzọ nootropics. N'ihi ya, ị nwere ike ịmepụta mmetụta dị mma karịa ụbụrụ sitere na nchịkọta Fasoracetam.
O yikarịrị ka ị ga-enweta ọgwụgwọ ahụ na-eme na Burkinaracetam mgbe minit iri atọ nke iji ya mee ihe. Mgbe a na-eji nwayọ mee ihe, ọ na-arụ ọrụ ahụ ngwa ngwa, ị pụkwara inwe mmetụta mmetụta ala na-eme na minit iri. Mmetụta ya nwere ike ịnwụ ruo awa asatọ. Ọkara ndụ nke Burkinaracetam dị ihe dị ka elekere abụọ ma ọ bụ atọ ma nọgide na-agbakọta n'ime ahụ site n'iji ya eme ihe.
Enweghị ọtụtụ ọgwụ ndị nwere ike imetụta arụmọrụ nke Fasoracetam. Nanị ọgwụ nke nwere ike ịmekọrịta ya bụ phenibut, otu ọrụ nke na-arụ ọrụ site na ịmepụta ndị GABA natara. A na-ejikarị eme ihe iji meziwanye ọrụ ịchọ mma na belata nchegbu.
Isi ọwụwa na-ejikarị racetam nootropics n'ihi na ha na-eduga nkwụsị nke choline na ụbụrụ. Ihe mgbu nwere ike ịdị na-emekarị, kama iji wepụ isi ọwụwa, i nwere ike iburu ya Fasoracetam tojupụtara nke nwere usoro choline, dịka, Alpha GPC. A na-ejide usoro ọgwụgwọ na-ezighị ezi na ezighi ezi ugboro ugboro site n'ịhụ ihe mgbu nke isi, ma, ị ga-ahụ, jide n'aka na ị ga-eji aka nri na-eme nri nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-enwe isi ọwụwa, gbanyụọ ụra n'ihi na ọ na-enyere aka ịtọ ụbụrụ. I nwekwara ike iweli onu mmiri nke i were.
Bai na-ekwu, sị, "Amaghị m ihe kpatara arụ ọrụ na nhụjuanya ji ghọọ akụkụ nke m na-arụ ọrụ. Echefuru m na itinye uche m mgbe awa ole na ole m nọ n'ọrụ. My agadi nọgidere na-eme mkpesa, na m ga-achọ enyemaka. Mgbe m na-eji Burkinaracetam ruo oge ụfọdụ, ọ dị m mma. Enwere m ike, m na-eche nche ma na-echeghachi azụ, na enwere m ike ịrụ ọrụ ụbọchị ọbụla n'adịghị ka ụbụrụ m na-arụ ọrụ. M uche doro anya na ugbu a mezue ọrụ e kenyere n'oge kachasị oge. Amaara m na ọ na-ada ụda, ma onye ọ bụla nọ n'ọrụ na-ajụ m ihe m na-eji. Ha anaghịzi akpọ m ọkpụkpụ umengwụ dị ka ha na-eji eme ihe ugbu a ma ha emeela ka m bụrụ onye ọrụ kachasị mma na ngalaba anyị. Maka onye ọ bụla ka na-enwe obi abụọ maka mmezi a, m ga-agwa gị ka ị nọrọ na ya Burkinaracetam zụrụ n'ihi na ọ bụ ego ọ bụla ị ga-eji. "
Fan na-ekwu, sị, "Ọkara afọ ikpeazụ m tụrụ egwu na enwere m ike ịkwụsị nyocha m n'ihi na achọpụtara m na mịkọm dị nwayọọ. O wutere m nke ukwuu n'ihi na enweghị m ike iche na ọ na-ada mbà mgbe m gbasiri mbọ ike n'oge niile. Nwa klas m gwara m ka m gaa Fasoracetam, anaghịkwa m eleghachi azụ kemgbe ahụ. Ọrụ uche m amụbaala, m na-echetakwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile a kụziri na klas. Enwetara m na nsonaazụ ikpeazụ nke afọ ise, enwebeghịkwa m ọganihu nke ọma ebe ọ bụ na esonyere m ụlọ akwụkwọ ahụ. Enweghị m ụfụ ụbụrụ, ihe mgbakwunye a aghọwo ihe kachasị amasị. Ahụmahụ My Fasoracetam bụ nke na-enweghị atụ! "
Jinhai na-ekwu, sị, "Nwanne m nọ na-alụso ịda mbà n'obi na nchekasị ọgụ, n'oge na-adịbeghị anya, ọ malitere ịgwụ onwe ya. O wutere anyị n'ụzọ mmetụta uche dika ezinụlọ n'ihi na ọ dịghị ihe yiri ka ọ dị irè. Usoro ọgwụgwọ niile na usoro ịlụ ọgụ dịka ego efu. Ụfọdụ n'ime ọgwụ ya rụrụ ọrụ ruo oge ụfọdụ ndị ọzọ hapụrụ ya na-arịa ọrịa thyroid. Ọ bụghị ruo mgbe enyi nke onye ahụ na-ata ahụhụ site na ya nyere akụkọ nlezianya na-adabere na Burkina Faso. Kemgbe ahụ, ihe agafeela. Ọ bụ nanị otu ọnwa ebe ọ malitere ịṅụ ọgwụ ma enwe nnukwu ihe dị iche iche na mwakpo nchegbu ahụ. Ọ na-ekweta na ọ na-esiri ya ike ịnya ụda ma na-ehi ụra ya. Ka ọ dị ugbu a omume ya agbanweela ka mma, anyị nwekwara ike ịkọwa ihe niile ahụ na Fasoracetam. "
Jun na-ekwu, sị, "Mgbe m kwusịrị ịzụ azụ azụ na Fasoracetam izu abụọ gara aga ma were ya na okpukpe, enwere m obi ụtọ ịsị na ọ nyeworo m aka nke ukwuu. Enwere m obi ụtọ nke ọma na ọnọdụ obi m, enwere m obi ụtọ ugbu a karia m na-eche tupu ịmalite iji ya. Egwuregwu ike m arịgoola elu, anaghịkwa m eteta ụra na ike gwụrụ m. Ọbụna nke ka mma, enwere m ike ịrụzu ọrụ m kwa ụbọchị n'enweghị mkpa iwepụ. Na 60, enwere m ike iji obi ike kwuo na ọ dịtụghị mgbe ọ dị m ka ọ dị mma na ndụ m. Ọ bụghị ichefu na m na-ehi ụra ugbu a dịka nwatakịrị mgbe m nwechara ụbọchị na-arụ ọrụ. O doro anya na m ga-akwado ya maka onye ọ bụla chọrọ ka mma na ọnọdụ ha. "
Anyị ga-enye gị Fasoracetam na ego kachasị ọnụ ahịa n'ahịa n'enwetaghị njirimara na àgwà ya. Na saịtị anyị, anyị na-enyekwa ya nnukwu powders maka ire ere ahịa enyi. Enwere ike ịnwa ịzụta akara ule dị ọnụ ala karịa ma cheta na ihe dị ọnụ ala karịa ngwaahịa ahụ, nke dị ala na nke dị elu na ihe gbasara nke puru omume. Ọ bụ nhọrọ gị ime ego nke bara uru ego gị. Anyị na-ekwusi mgbe niile na ngwaahịa ahịa anyị, na mgbe anyị jiri ngwaahịa anyị, ị ga-amalite na-enweta nsonaazụ n'ime oge kachasị oke oge. Uru ọzọ nke na-abịa site n'ịzụ ngwaahịa anyị bụ na anyị na-emepụta ebe ọ bụla na n'oge. Ozugbo i nyere anyị iwu, ịnwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ngwugwu gị n'enweghị nsogbu n'oge oge mbupu. Ọ bụrụ na ị nwekwara mmasị n'ịzụ nnukwu powders, mgbe ahụ anyị nwetara ihe kacha mma maka gị.
Merchan, C., Morgan, R., Papadopoulos, J., & Fridman, D. (2016). Phenibut Overdose na Combination na Fasoracetam: Ọgwụ Ọjọọ nke Mmegbu. Akwụkwọ nke Nlekọta Ahụike na Ahụike Na-ahụ Maka Ahụ Ike, 1, 001-004.
Elia, J., Ungal, G., Kao, C., Ambrosini, A., Jesus-Rosario, N., Larsen, L. ... & Sykes, B. (2018). Burkinaracetam na ndị nọ n'afọ iri na ụma na ADHD na glutamatergic gene network variants disrupting mGluR neurotransmitter signaling. Nature Communications, 9 (1), 4.
Harmsen, B., Robeyns, K., Wouters, J., & Leyssens, T. (2017). A Na-amụ banyere Ụdị State State nke Alakụzra: A Potential Anti-Alzheimer Pharmaceutical. Akwụkwọ akụkọ sayensị ọgwụ, 106 (5), 1317-1321.